1. Ndezvipi zvakanaka zvako mukugadzira magirazi?
Cnc machine Kubatsira:
NeCNC girazi kugadzira tinogona kuburitsa chero chero chimiro chingafungidzirwa. Tinogona kushandisa ako maCAD mafaera kana mapurani ekugadzira michina maturusi enzira.
Yedu CNC michina inoshandiswa nechinhu chimwe chete mupfungwa, kugadzira zvigadzirwa zvegirazi zvemhando yepamusoro. Ivo vanogara vakabata kushivirira kwakasimba pamusoro pemamirioni ezvikamu uye vanogashira kugara vachigadzirisa kuitira kuti mashandiro avo asatombodzikisira.
Mishini yedu yakagadzirirwa kudzikisa seti-kumusoro nguva uye shanduko inodiwa kugadzirisa dzakasiyana siyana zvikamu. Isu tinogadzira zvakare michina yekuita panguva imwe chete kugadzirisa akawanda mativi uye mimwe michina inomhanya yakatenderedza nguva. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kuvimba neZHHIMG kuti igare ichiita nguva yekuendesa uye kunyange kukurumidza kugadzirisa.
2. Ndingaite sei kuti ndione kuti ndeupi mhando wemucheto wakanakira yangu girazi chigadzirwa?
ZHongHui Intelligent Kugadzira Boka (ZHHIMG) Girazi timu ine akati wandei ane ruzivo mumba-magirazi ekugadzira mainjiniya anogara achida kubatsira vatengi mukusarudza girazi rakaringana rekugadzirisa zvigadzirwa zvavo. Chinhu chakakosha cheichi chiitiko ndechekubatsira mutengi kudzivirira chero zvisingakoshi mari.
Midziyo yedu inogona kuumba girazi kumucheto kune chero chimiro. Ma profiles akajairwa anosanganisira:
■ Cheka - Mupendero unopinza unogadzirwa kana girazi raonekwa uye nekuburitswa mhepo.
■ Seam Rwokuchengetedza - Mupendero wakasonanidzwa wakachengeteka chidimbu chidiki chakachengeteka kubata uye chingangoita chip.
■ Penzura - Penzura, inozivikanwawo se "C-chimiro", chimiro cheredhiyo.
■ Akatsikwa - Nhanho inogona kuyerwa kumusoro kwepamusoro ichigadzira muromo wekusvitsa girazi kuimba yako.
■ Kona Yakavezwa - Makona kubva pagirazi pane akakomberedzwa zvakapfava kudzikisa kupinza nekukuvara.
■ Flat Ground - Micheto ivhu rakatsetseka uye makona emakona akapinza.
■ Flat naArris - Mahombekombe ivhu rakapetana uye mabhero akareruka anowedzerwa kukona yega yega.
■ Beveled - Mitsetse yekuwedzera inogona kuiswa pagirazi ichipa chidimbu zvimwe zviso. Angle uye saizi yebevel ndeyekutsanangudza kwako.
■ Mubatanidzwa Wakaunganidzwa - Mamwe mapurojekiti angangoda mubatanidzwa wemakona (Kana girazi rinogadzira rikatanga kucheka chimedu chegirazi kubva kugirazi-girazi, chigamba chinoguma chave nemipendero ine hasha, yakapinza uye isina kuchengetedzeka. mitsara iyi yezvidimbu zvakasvibirira kuti zvive zvakachengeteka kubata, kudzikisa kucheka, kuvandudza chimiro uye kuvandudza kutaridzika.); bata nhengo yeZHHIMG girazi timu kuti ubatsirwe.
Nemazvo Granite Kufanana, Nemazvo Granite Cube, Nemazvo Granite Surface Plate, Epoxy Concrete, Nemazvo Granite, Precision Granite Square Mutongi,